Laga soo bilaabo buugga shirqool listicmaalka The. In dareenka casriga ah, fikradda u kacay inuu listicmaalka iibsadaan dadweynaha ee 1949.
Long ka hor inta lacagta dhabta ah loo isticmaalo in lagu waxyaabo kale oo lacag. Shell loo isticmaalo sida lacag Polynesia. Tusaalayaasha kale ee "lacag" waxaa jiray dhagxan, oo baadad, iyo qabsatooyinkoodiiba, kalluunka iyo xataa xoolaha.
Xataa ee qadiimiga Masar iyo Boqortooyada Roomaanka loo isticmaalo lacagaha listicmaalka, tusaale ahaan, at spannmålsköp. Shirkada Western Union oo la asaasay magaalada Maraykanka ee Rochester ee New York State. Waxaa xidido ku leeyahay ay dib ugu 1851 marka ay la odhan jiray Daabacaadda Company Telegraph ee Mississippi. Western Union ayaa ugu horrayn la soo shaqeeyay lacag soo diray oo telegrams dunida oo dhan. sort A ee kaararka deynta hore hore u ahaa 1890, qarnigii ee Europe. 1914 ka bilaabay Western Union la iibsadaan listicmaalka credit card ah in loo isticmaali karo in heshiis ay ku heshiiyeen.
The kaararka deynta dhabta ah asalkiisu ka soo jeedo ee qarnigii 20-aad, Mareykanka soo saartay shirkadaha shidaalka sida iyo silsilado hotel. Mid ka mid ah factor qayb isticmaalka sii kordhaysa oo ka mid ah kaararka ka weyn way sii kordheen wadashada markii shirkadaha shidaalka waxay bilaabeen inay soo saaraan kaararka. dukaamada Waaxda ayaa sidoo kale bilaabay inta lagu jiro tobankii sano this si ay u daabacaan nooc ka mid ah calaamadihii aqoonsiga si ay macaamiisha kuwaas oo ku baayacmushtaray on credit. Inkasta oo dukaanka waaxda NK loo isticmaalo in tobanaan sano ka hor ah kaararka deynta calaamadihii naxaas dhabta ah. "Credit card" ugu horeysay Sweden uu ahaa sidaas daraaddeed waxa loogu yeero NK-card dhab ahaa mässingspollett ah tiriyey. In 60s siiyey NK kaararka credit u gaar ah ee dareenka casriga ah ee model Maraykanka.
Shirkadaha qaarkood waxay bilaabeen in kaararka carruurnimada bixiyaan credit iyo debit cards macaamiisha ugu fiican. Kuwaasu waxay ahaayeen eheeyn in ay isticmaalaan oo si buuxda u xidhan shirkadda in su'aasha. Dukaamada iyo ganacsiyada kale ka dibna lahaa kaararka iyaga u gaar ah. Qiyaastii 1938 waxay bilaabeen inay aqbalaan kaararka kasta oo kale ee. kaararka ayaa la sameeyay ee 30-ka mid ah xaashida si loo yareeyo khatarta ka mid ah been-abuurka. John Biggins of Flatbush National Bank ee Brooklyn abuurtay card ugu horeysay credit soo saaray bangiga 1946. Barnaamijkan waxaa lagu magacaabaa ChargeIT iibsiga lala dhexeeya macaamiisha bangiga iyo ganacsatada maxalliga ah.
Sida ay u dhan runtii bilaabay - Cunnada Club
McNamara sidoo kale ay ogaadeen in uu jirin iyada jeebka si ay ugu bixiyaan hadhuudhka. By qoraal saxiixa kaarka ganacsi uu siiyey makhaayad uu noqon karo biil ka dib maray. Sida ay opinion guud milmay labadan waxyaalood in McNamara lahaa fikirka ah ee waxa uu noqon doono kaarka amaahda dhabta ah. In 1950 wuxuu aasaasay shirkadda Cunnada Club ay la socdaan qareenkiisa Schneider.
Shirkadda noqday dhexaadin u dhexeeya macaamiisha iyo shirkadaha ay ka soo iibsatay. On the kaararka ugu horeysay ku qoran magacyada hay'adaha lacagta 'on kaararka. Kaararka waxaa loo isticmaalaa inta badan durbaan garaace ee bixinta cuntada. Cunnada kaararka Club markii hore ahaayeen ka qaadaan kaararka taas oo loogu tala galay in ay wax walba ku lahaa bil kasta la bixiyaa.
Bloomingdale ahayd muddo la Wadaage in shirkadda. Haddii kale, waxa uu ahaa ugu caansan sida kii dhaxalka lahaa dukaanka waaxda Bloomingdale ee iyo förhållade caan ah oo la model photo Vicki Morgan. qof kale oo muhiim ah in taariikhda Cunnada Club Matty Simmons. Simmons ahayd inta lagu guda jiro muddo ah madaxweyne ku xigeenka ee Cunnada Club laakiin waa ugu caansan sida soo saare television iyo filim.
The baraf listicmaalka American Haddaba waxay ahayd rogid iyo helay weyn iyo weyn sannad kasta. Mid ka mid ah tallaabada ahayd markii bangiga kaarka debit ugu horeysay bilaabay inuu la soo saaray sannadkii 1951 by Franklin National Bank of Long Island. Si dhakhso ah, tartan Cunnada Club iyo ka badan oo shirkadaha, kuwaas oo ku koray kooxda credit card waaweyn.
American Express iyo Wells Fargo
American Express waxaa la aasaasay 1850 in Buffalo si ay u fuliyaan adeega mail express. Later balaariyay la gaadiidka lacag caddaan ah iyo hawlaha warshadaha safarka. Henry Wells aasaasay Express American ah oo ay la socdaan William Fargo iyo John Butterfield. Saddex sidayaal ayaa ku biireen mid ka galay. Goor dambe oo qarnigii 50aad, bilaabay howlaha credit card in tartan la Cunnada Club. Shirkadda ayaa sidoo kale gacmahaaga ay dunida telefishanka. American Express ayaa xaruntiisu tahay magaalada dhismayaasha kala duwan ee New York.
waqti A for American Express ayaa sidoo kale la aasaasay hadda Wells Fargo dadka isku magaca leh. Wells Fargo ayaa markii dambe waxaa la odhan jiray mid ka mid ah bangiyada ee dunida ugu weyn. American Express iyo taariikhda Wells Fargo ayaa si isku maran in ay adag tahay in la kala saaro. Sida Express American ah ayaa bilaabay in ay kaarka ugu horeysay ee 1958 sida soo bandhigay ayaa sidoo kale lagu xisaabiyo credit. Waxaa la doorbidayo waa ganacsato kuwaas oo la isticmaalaya kaarar American Express. American Express ayaa dhawaan la silsiladda dukaamada waaweyn ee Walmart by kaas oo ka mid ah siinayaa kaarka wicitaanka ee Bluebird Card ka bixinta shaqada.
American Express aqoonsan tahay inay tahay si gaar ah in la eego oo ka mid ah kaararka ugu qaalisan aan si toos ah ula marketing ka qabashada. Macaamiisha waxaa loo tixgeliyaa in badan oo ka tirsan kooxda gaar ah u noqdaan.
qorista waa ka garabaka buul jooggo badan ganacsi. Shirkadda qabanqaabisaa ku iibsadaan oddest iyo adeegyada macaamiisha. design waa xoogaa garabaka daaweynta Rolls-Royce ee macaamiishooda. Laakiin kaararka muuqaalka raaxo leh waa in aan la barbar dhigo baabuurta raaxada ah. Halkii ay yihiin "tarooli duug ah qurmay xaar." Waxay dhacdaa waqti ka waqti kitaabkii. nacayb The of credit card helo maskaxda wax qora in ay beddelaan ka macquulka ah in hillaac dareenka xun.
Shirkadaha ee dareenka caadiga ah. Waxaa jira shirkada saamileyda ah in iibiya liisanka card. taariikhda hore MasterCard ee ku xidhan yahay labada ururada bangiyada, waayo, kaararka deynta. Isku xidhka iyo WSBA. Waxaa abuuray mashruuc loogu talagalay credit card loo yaqaan Master Charge. Master Charge waxaa Waayadan dambe MasterCard. Bilawga waxaa ka mid ah hormaray shirkad caalami ah card ahaa wada shaqeyn ka dhexeysa Master Charge iyo bangiga Mexico Banco Nacional. si faahfaahsan A sheekada ahaa khilaafka sharci by Worthern Bank kacay lama oggola inuu ku biiro Master Charge. Xarunta MasterCard ee hadda ku sugan yihiin magaalada Iibso ee New York State.
show waxay la mid MasterCard urur iskaashato. Shirkadda waxaa iska leh urur ganacsi oo ka kooban inta badan ee bangiyada. Waxaa jira xiriir adag la leh Bank of America waxaa bangiga ugu horeysay bilaabay bixinta Visa horreeyay BankAmericard 1958. card First BankAmericard isticmaali karo oo kaliya in California. Waxaa la reebay in ay sameeyaan bangiyada xuduudaha gobolka. Tani waxay u dulmaray by Oggolaanshaha kaarka bangiyada kale. kaararka deynta Most
waxaa miiqeen off ka Bank of America si ay u noqdaan shirkadda non-ku qoran iyo BankAmericard National xubin ka leedahay.
waqti A ka hor show helay magaceeda hadda sida laga siiyey kaarka amaahda ugu horeysay u yeedhay entrée. Waxay ahayd kaarka debit ah in lala nidaamyada computer ka dibna cusub ee soo baxaya for sugida yeedhay waxaan SALDHIGA iyo SALDHIGA II. nidaamyada u dhiganta Master Charge lagu magacaabo INAS iyo INET.
The qeybo ka mid ah View ku yiil meel ka baxsan Mareykanka laga iibiyey sanadkii 1974 oo noqday hoosaad ka mid ah koox ka mid ah bangiyada ugu yeedhay IBANCO. Shirkadda ayaa loo magacaabay BankAmericard Qaranka ayaa ugu danbeyn ku saabsan in Visa USA. IBANCO dambeyntii baxshay oo ku saabsan in Visa International. boostada hore ee credit card shirkadda ee magaalada ku jiray ee Fresno, at initiative reer Yuusuf Williams. Markaasaa waxaa u timid warqadaha magaalooyinka kale ee California. Mashruucan ayaa waxaa hareeyay waqtiyada oo dhan dhaleeceyn iyo khiyaamo labadaba. 1970 bedelay magacyada oo dhan si ay u muujiyaan. Caalamiyeynta ee kaararka deynta bilaabay hore US leh bangiyada suuragasho in nidaamka kaadhka u gaar ah oo ku biiray mid ka mid Master Charge ama BankAmericard oo markaas ka dib ka noqday MasterCard iyo Visa.
View helay 1987 xilkiisa ka mid ah in ay is ogow of dhan network tafaariiqda Interlink ee kaararka bangiga (network ugu weyn ee noocan ah oo dalka Mareykanka ah). In ka '90s bilaabay Smart Card Visa Cash in lagu shubto karaa lacag via ATM. View riixay horumarka ka karbaash magnetic in kaararka chip oo ay ku jiraan wax la yiraahdo Barnaamijka Partner. In Manhattan, bangiyada Citybank iyo Chase Manhattan in ay 90s daahay kaarka tijaabada ah in gabi ahaanba lagu guulaysan. Inta badan, dadka kaadhka kaliya hal jeer lagu eedeeyay. iskaashi A shirkad search Internet Yahoo bilaabay in la abuuro page iibsiga Internet-ka. Eeg sidoo kale furay iskaashiga arrin utkonkurerat la Microsoft in dadka samayn karin macaamil ganacsi lacag bangiyada ay your computer. Display xaruuntiisu tahay Fresno ee California.
kaararka deynta American Express iyo Cunnada Club isu soo baxay siin halka Visa iyo MasterCard ma samayn. Xaalada danbe, waxa ugu horayn waa bangiyada xubin in soo saari kaararka. Farqiga u muhiim ah oo u dhexeeya shirkadaha credit card waa in qaar ka mid ah sidaas darteed in la yidhaahdo bangiga simaha, halka kuwa kalena aysan lahayn. Visa iyo MasterCard network isgaarsiinta xogta kaararka kala duwan farsamo ahaan aad u kala duwan. nidaamka MasterCard, loo yaqaan Banknet, Visa ee VisaNet.
Visa iyo MasterCard waxaa sidaas ay gacanta ku bangiyada xubin sida users card waa xaqiiq in gabi ahaanba ay ku jirtaa gacanta ee bangiyada, kuwaas oo. Tartanka u dhexeeya Visa iyo MasterCard waa ficil jirin, sababtoo ah bangiyada ugu jira xubno ka mid ah ururka ayaa sidoo kale xubno kale.
Baro iyo Sears
Baro Adeegyada Maaliyadeed ama gaaban Baro waa shirkado kale oo waaweyn US credit card. Waxaa la aasaasay 1985 by qeybinta shirkadda maaliyadda Dean Witter iyo qayb ka mid ah Sears noqday.
Baro noqday shirkad madax bannaan ee 2007. Waxaa siinayaa kaarka Baro Card. The shabakadaha card farsamada loo yaqaan Baro Network iyo Pulse. Xarunteeduna tahay magaalada hareeraheeda ah Chicago. 2008 iibsaday Baro Club Cunnada ee kooxda dhaqaale Citigroup.
Sears, cawsha & Co. waxaa la aasaasay 1886 by Richard Sears iyo degganaan jireen C. cawsha. Sears muddo noqday oo ay ku jiraan shirkadaha US mail-amarka ugu weyn. Sears waxa sidoo kale la Dhismaha Sears Tower in Chicago haatan kan la yidhaahdo Tower Willis ah. Dhismaha The kaas oo muddo ahaa dhismaha dunida ugu dheer waxaa ay leedahay ilaa 2004 by Sears.
jeegga waxay keeni kartaa in ay asal ahaan ay dib ugu 1200s ah. Laakiin isticmaalaan runtii off qaatay kaliya marka jeegaga ayaa bilaabay in ay isticmaalaan dahabtumayaashii ee England. Checks ayaa taariikhda oo dhan, waxaa mararka qaarkood loo isticmaalaa sida lacag caddaan ah. Tusaale ka mid ah tani waxay ahayd markii askari ee 50s ee Hong Kong jeegaga ayaa loo isticmaalaa sida lacag kaash ah. ganacsade kasta oo saxiixay jeegga ee Chinese gadashada kasta. Waxaa dhici karto in askari dhowr bilood ka dib arkay jeeg oo uu isu haystay in uu hantidiisa.
credit card iyo jeeg shaqeynaya marka la eego bangiyada si la mid ah. haystaha akoonka qoray jeeg ay lacagta ka mid ah taas oo ka dibna qaataha soo furan karaa bangiga. account Hubinta xisaabsan laga yaabaa (is barbar dhig kaararka deynta). Qof ku tilmaamay barayay jeegga sida "version mulaca ee kaarka bangiga" a. In kontantlöshetens carruurnimada hadlay sida badan oo ku saabsan bulshada jeeg xalinta saabsan listicmaalka ah.
Nin hore u vurmade 60 qarnigii baaritaan iyo listicmaalka bulshada this meeshii Yooxanaa Diebold ah. Shirkaddiisu tashan Diebold Group abuuray dhowr network computer-ku-saleysan ee bangiyada ee tobanka sano this. Diebold ee fikirka saamayn George Mitchell oo lahaa meel sare oo Reserve Federaalka (bangiga dhexe ee US). Arintaan ayaa isku dayay in ay saameyn ku bangiyada Maraykanka in ay u baddashaan nidaamyada computer. Waxay sheegtay in jeegaga waxay ahaayeen qaali ah, kaas oo ahaa mid aad u la mid ah dood maanta lacag caddaan ah.
In hore 90 ee ahaa bixinta toddobaad ee Sweden jeeg. In 2000 ka, tiradaasi waa cqaadir 0.1 boqolkiiba. Iyada oo jeegag waqti dhamaaday bangiyada Swedish sidaas iyo aad u badan. None of bangiyada Swedish dhicin oo keliya ku amraya baaritaanka. Markaas, markii bangiga Swedish ugu danbayntii u raaceen kale ee jeegga iyo qaddar lagu shaabadeeyey dhererka. Sida cajiib waa khiyaamo jeeg in waa dembi oo dhan United States, laakiin aan karin inay overdraw account credit ah.
qayb ka mid ah lacagta caddaanka ah ee taariikhda
Long ka hor inta lacagta dhabta ah loo isticmaalo in lagu waxyaabo kale oo lacag. Shell loo isticmaalo sida lacag Polynesia. Tusaalayaasha kale ee "lacag" waxaa jiray dhagxan, oo baadad, iyo qabsatooyinkoodiiba, kalluunka iyo xataa xoolaha. Maqnaanshaha lacagta birta ah si joogto ah u leeyihiin bixinta oddest mararka qaar loo isticmaalaa. Tusaale ahaan, waxay baararka bir ah loo isticmaalo sida lacagta ee Sparta maxaa yeelay, waxay ahaayeen go'doonka ka ah dunida ka baxsan.
qadaadiicda Southwest bilaabay in la isticmaalo in qaybo ka mid ah Aasiyada Yar ee 600 BC Near East ahaa oo ku saabsan waxa hadda aynu u qayshanno Bariga Dhexe. Waxay ahayd lydiske Boqorka Croesus kuwaas oo in 500 BC bilaabay Roomaanka Shilimaad oo lacag iyo dahab. Waxa uu sidoo kale ugu baaqay Croesus oo dhanba erayga qof weyn oo hodan ah. Halkaasna waxaa ku tiil yaraanta birta qaaliga ah ee loo isticmaalo in lagu inta badan copper. Tani waxay dhacday, tusaale ahaan, hore ee Rome. Inta lagu guda jiro Age Viking ayaa la keeno lacagta qadaadiicda badan in ay Sweden ka dunida Islaamka iyo qeybo ka mid ah Europe. Waayo, Vikings wuxuu ahaa qiimaha lacagta ah, sidaa darteed in ay lacag ku hadlaan. Sidaa darteed, xitaa lacagta qadaadiicda huriye oo lacag ah iyo waxyaabo kala duwan oo lacag sida bixinta. Later sheekada, waxaa jiray taarikada copper weyn in laga codsadaa in ay lacag.
The lacagta birta ah marka hore lacag Swedish ah ayaa qabtay in Sigtuna ku wareegsan sanadkii la soo 1000. In hore 1500s waxay bilaabeen inay tiriyaan beesadood. Laga bilaabo bartamihii 1800-bilaabeen in Sweden ay isticmaalaan a lacagta birta ah madaxa (taaj oo markaas taaj), taas oo loo kala qaybiyey 100 senti. Markii mid ka mid ah Sweden ka baxay Heerka dahabka ee 1931 la waayay farqiga dhabta ah ee u dhexeeya lacagta birta ah iyo biilasha. Heerka dahab ah loogu tala galay in praktien raso la badelay karo dahab ka reserve dahab ah. Tani iyo taallo raso in guud ahaan ay ku salaysan tahay yaboohay yabooh run ah iyo kalsoonida ee gobolka. trust A for gobolka sida ay hadda tahay waa in aan ku tiirsan yihiin. karti dhaqaale waa mid aad u baahsan. Laakiin rumaysad halkii xun kaash badan addoon in an listicmaalka aan maangal ahayn oo aan kalsooni wax at dhan.
taariikhda keensatay iyo horumarinta waxaa si dhow lala farshaxanka daabacaadda. Waxay asal ahaan waxay ahaayeen nooc ka mid ah rasiidhada ama deyn ka hor inta aysan noqday lacagta dhabta ah. tillverkads daabacaada lacag ugu horeysay ee Shiinaha ee ku saabsan waqti isku mid ah sida lacagta birta ah dhabta bilaabay soo socda (600 BC). Markaasuu bilaabay isticmaalka rabadh sida tartiib ah ku faafa Shiinaha Yurub ee qarniyadii dhexe. Waxay ahayd si dhab ah in Sweden iyo mid ka mid ah 1600kii markii ugu horeysay siiyey raso habboon in Europe. First, by Stockholms Banco, ka dibna inta boqortooyadayda ku xayasiinaysa bangiga iyo ugu dambeyntii Riksbanken ah dhamaadka 1800-ka. Horaantii cadaadisay bangiyada kale oo aan ahayn qoraalada Riksbanken ee u gaarka ah. in Sweden Next, England ayaa daabacay raso at.
Numismatics - saynis xiiso iyo hiwaayad
Numismatics waa waxbarasho ee lacagta birta ah oo dhan. Waxa kale oo ka mid ah si hunguri weyn fiddling leh oo raadi calaamadihii, rabadh iyo bilado. Xitaa sida wiil, qoraaga ayaa la kaabayaasha dhaqaale ee haayaha qadaadiic qaro weyn in jirey maktabadda. Ururinta lacagta birta ah iyo wixii la mid ah ma ahan oo kaliya oo ku saabsan helitaanka walxo xiiso leh in hantidooda ay xumme tahay, maroojin soo jeesan oo ugu danbeyn joojin meelo yar yar ee folder qadaadiic ah. Waxaa sidoo kale waa hab si ay u bartaan oo ku saabsan taariikhda si la mid ah sida ururinta stamp noqon kartaa hab si ay u bartaan oo ku saabsan dalalka kale. Mararka qaarkood eegtahay in ay ku dhow xiriirka kaliya ee dhabta ah leh muddo taariikhi ah.
Ururinta qadaadiic waa mid ka mid ah kuwa hiwaayadaha halkaas oo ay jiraan suugaanta weyn. The numismatikern horeysay Swedish Eliyaas Brenner. Waxa uu ku qoray dhamaadka 1600s shaqada ee lacagta birta ah, kuwaas oo horyaalka in sidoo Swedish noqon lahaa wax u eg "qaamuuska quful dalka SVEA iyo Göters". Qaybtani waxa ay sidoo kale waa meel la soo jeediyo si ay u soo booqdaan quful Golaha Wasiirada ee Stockholm. Waxaa sidoo kale jira ururin qadaadiic xiiso magaalooyinka kale ee Iswiidhan. Qadaadiic Golaha Wasiirada waa lacag kaash ah matxafka iyo numismatic ururinta ugu weyn ee Sweden. Waxa uu noqday museum gaar ah ee 1975 iyo dhaqaaqay laba qof oo ah labaatankii sano ka dib si Castle Hill.
Mid ka mid ah farriinta aasaasiga ah kitaabkan waa in ay muujiyaan sida ay dunida oo dhan waa u dhowaanin iyo aad u badan guud ee kaligii talisnimada listicmaalka ah. lacag caddaan ah ayaa in ka badan in ay baaba'aan more aad waayi numismatics cajiib ah nasiib daro uu soo jiidashada by jarida mindi
dhamaadka Xadhig dunida-taariikhiga ah inkasta oo ay maraa qayb weyn oo ka mid ah sheekada markaas ugu dambeyntii jebiyo. Hadda waxa la joogaa wakhtigii si ay u joojiyaan ka hor inta qoraaga bilaabaa inuu qoro buug ku saabsan lacagta birta ah iyo taariikhdooda nasiib daro. Buugani wuxuu dhab ahaan ugu saabsan ilaalinta lacag caddaan ah oo casri ah waa. Laakiin tani waa codsi aad u daran. numismatists af Iswiidhish iyo af ururiya qadaadiic! Midoobaan! Caawinta si ay ula dagaalamaan si loo ilaaliyo lacagta cusub iyo kii hore. Dagaal ka dhan ah Xarakada aasaaska listicmaalka taariikhda.
Vecka 29, söndag 25 juli 2021 kl. 04:31